Casriga ah Android waa tijaabadooda ee suuqa mobile ay sabab u tahay codsiyada ay fududeeyey oo user-friendly. Android users, halka casriyeeyo, inta badan waxay door bidaan casriga cusub ku saleysan hal madal ay kaas oo ay qabatimeen.
Huawei, mid ka mid ah soo saarayaasha casriga ah ee Shiinaha, ayuu soo dhigay ugu iibinta telefoonada Android ee Shiinaha. Haddii aad qorshaynaysid in la gaarsiiyo in ka smartphone Android brand-cusub, arrinta wareejinta xogta badbaadiyey in aad telefoon jir Huawei waa in lagu Weligaa inta aad dhibaa, tan iyo fikradda asalkiisu ka soo jeedo ee maskaxdaada. Tani waa meesha qodobkan timaado in aad samatabbixinta adigoo u sharaxaya dhawr siyaalood oo lagu talinayo xogta aad ka Huawei gudbaayo casriga kale Android fudayd.
Habka ugu badan waxay u baahan tahay samaynta PC sida a go-dhexeeya-socodka ah ee files ku wareejinta. Inkastoo wadada this leedahay yaryar (oo ka dib ku tilmaamay), waxaa inta badan ku xiga users kuwa Halmaansan kale oo ka wanaagsan, oo ay doonayaan inuu ku soo shirtagi in habka soo jireenka ah ee kala wareejinta xogta. Si aad u dhaqmaa sida uu qabo habkan, waa inaad raacdo tallaabooyinka hoos ku qoran:
Xogta laga Huawei Phone wareejiyo Android la isticmaalayo habka dhaqanka
• Talaabada 1: xogta Transfer ka Huawei smartphone in kombuutarka. (A Windows 7 computer halkan waxa loogu adeegsaday.)
1. in PC ee Connect telefoonka Huawei iyadoo la kaashanayo cable ah USB micro.
2. screen desktop-ka, double-riix Computer icon.
Fiiro gaar ah : Haddii icon Computer ma joogo shaashadda desktop-ka, waxaad riixi kartaa Start button dhankiisii ​​bidix hoose, iyo riix Computer doorasho ka qaybta midig oo soo bandhigay Start menu.
3. furay Computer uu furmo suuqa, double-riix smartphone Huawei ee icon si aad u furto.
4. From ka kooban bandhigay, dooro macluumaadka in aad rabto in lagu wareejiyo si aad casriga Android.
5. Xaq-riix mid ka mid ah files soo xulay oo guji Nuqul ka menu macnaha guud.
6. Xir suuqa kala Huawei ah.
7. Back on suuqa kala desktop-ka, xaq-riix meel kasta oo guji koollada ka menu macno u muuqata ka.
8. Barkinta aad telefoonka ka PC iyo saarto cable USB ah.
• Talaabada 2: xogta Transfer ka PC in ay aad casriga cusub Android.
1. Si aad macluumaadka u gudbiyaan si aad casriga Android, xirmaan qalabka si aad PC la cable ah USB micro.
2. Marka PC helo qalab cusub, double-riix Computer ka desktop-ka.
3. furay Computer uu furmo suuqa, double-riix icon matalaya aad casriga cusub Android.
4. Ka suuqa kala smartphone Android soo bandhigay ayaa, double-riix si aad u furato folder meesha aad rabtid inaad u guurtid xogta.
5. Yaree uu furmo.
6. Laga bilaabo screen desktop-ka, dooro files in aad hore u soo guuriyeen ka smartphone Huawei.
7. Xaq-riix mid ka mid ah files soo xulay.
8. Guji ee Copy doorasho ka menu macnaha guud.
9. Soo Celinta suuqa kala casriga ah la yareeyo iyo xaq-riix meel kasta.
10. Click doorasho koollada ka menu macnaha guud iyo sugto files ah in ay soo guuriyeen in aad casriga Android.
Inkastoo habka kor ku xusan waa sahlan oo ay raacaan, waxa uu leeyahay khasaaro yar. Qaar ka mid ah ceebaalowyo weyn ee wadadan ku qoran yihiin hoos:
• Waa waqti lumis iyo habka dheer.
• Iyada oo aan gargaar ka mid ah qalab dhinac saddexaad, ma aad nuqul karaa xiriirrada iyo fariimaha qoraalka ah badbaadiyey in aad casriga Huawei.
• Waa in aad raacdaa habka ku daal ee soo xirashada iyo goynta casriga ah - mid kastaba mar ah.
Xogta laga Huawei wareejiyo Device kale Android ee One Click
Si aad naftaada ku badbaadin ka kaaftoomi ee maraya hanaanka wareejinta eheeyn dhaqanka kor ku xusan, waxaad kala soo bixi kartaa qalab dhinac saddexaad si fudud aad shaqo. Mid ka mid ah codsiyada software ugu fiican ee ay category waa Wondershare MobileTrans.
MobileTrans Waa qalab aad u waxtar fiican ka Wondershare - mid ka mid ah horumarinta software sare - in aad isticmaali karto si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya casriga ah ee click hal adiga oo isticmaaleya isticmaale PC sida go-u dhexeeya. MobileTrans Waa dagaalyahan ugu dambeeyay ee ka Wondershare in ay mobile qaybta utility software. MobileTrans Taageertaa ka badan 2000 oo lagu daydo casriga ah iyo la dhufto ee macruufka, Windows, Android oo Symbian shaqeyn karaan. Interface ee barnaamijka waa nadiif ah oo fududeeyey in idin Toosiya nidaamka oo dhan xogta kala iibsiga si habsami leh. Wondershare MobileTrans Sidoo kale xusid mudan in digtoonaadaan sida ay imperceptibly ka shaqeeya iyada oo aan wax gubaya khayraadka aad u badan oo Windows ama Mac PC.
Si aad xog ka smartphone Huawei wareejiyo smartphone kale Android isticmaalaya Wondershare MobileTrans, waa inaad raacdo tallaabooyinka hoos ku qeexan:
• Talaabada 1: Download, rakibi, iyo bandhigista Wondershare MobileTrans aad kombuutarka. (Windows 7 halkan waxa loogu adeegsaday.)
1. Download version saxda ah ee codsiga sida nidaamka hawl gal.
2. Markii soo bixi, dhammaystiraan geedi socodka rakibo by double-gujinaya ay file eedeysanuhu oo raacaya tilmaamaha ku-screen yimid.
3. Ka dib markii Wondershare MobileTrans uu ku rakiban, double-guji toobiye icon in aan bilowno software ah.
4. interface codsiga furay, riix Phone in Transfer Phone button in la furo ee Transfer uu furmo suuqa.
Fiiro gaar ah : Halkaa marka ay marayso, markaad baxdo, aad iska indho tirin kartaa xusuusin ah si loo soo dajiyo Lugood sida aad lama wareejinta xogta ama ka qalab macruufka ah.
• Talaabada 2: Isku labada casriga ah si aad PC.
1. Isku labada telefoonada si aad PC isticmaalaya fiilooyinka ay USB kala.
2. Marka xiran, si loo hubiyo in aad ka arki kartaa cagaaran xiran icon hoos ku qoran labada walxood smartphone on interface ka.
3. Sidoo kale in la hubiyo in ay Huawei iyo smartphone kale Android waxaa lagu soo bandhigaa hoos Source iyo meel loo ahaadana iyadaa qaybaha ay u kala horreeyaan.
Fiiro gaar ah : Haddii aan soo bandhigay hoos qaybaha ku haboon, riix badhanka Flip shaashadda si ay si sax ah u dhig.
4. Optionally ka fiiri macluumaadka oo cad ka hor inta nuqul sanduuqa hoos ku meel loo ahaadana iyadaa qaybta ay dhacdo in aad rabto in aad tirtirto wixii xog ah hore u kaydiyaa qalab cusub Android.
• Talaabada 3: xogta Transfer ka Huawei in qalabka Android
1. Marka nooca xogta wareejin oo dhan uu ku qoran ee u dhexeeya Source iyo meel loo ahaadana iyadaa qaybood ee Select content in aad nuqulka sanduuqa, hubi checkboxes matalaya xog ah in aad rabto in aad nuqul.
2. Marka aad calaamad u tahay fursadaha la doonayo, riix Start nuqul ka button hoos ku Select content in aad nuqulka sanduuqa.
3. Sug ilaa MobileTrans ku wareejinaya faylasha loo doortay in ay qalab Android aad, iyo mar ay qabato, riix OK ka sanduuqa popup ah.
Fiiro gaar ah : Waxaad carqalad ku keeni karaan kala iibsiga mar kasta oo waqti adigoo riixaya Cancel button ka geeska midig hoose oo ka mid ah ay Progress uu furmo suuqa.
Wondershare MobileTrans Waa xal karti leh oo lagu talinayaa in kuwa raadinaya hab stress-free of wareejinta macluumaadka u dhexeeya labada casriga ah. Ka sokow guuray xogta aad, software ayaa sidoo kale siinayaa ikhtiyaarka ah in la abuuro nuqul raad raac ah oo xogta lagu kaydiyaa qaali ah aaladaha aad.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Huawei in Android